Iimveliso-I-Wuhan Golden Laser Co, Ltd
Umatshini wokusika umbono we-Laser
Umatshini wokusika weLaser Flatbed
CO2 I-Laser Cutter Engraver
I-Tube / Umatshini wokusika i-Laser Machine
Izithuthi kunye nezoPhapho
Iikhaphethi zeenqwelo moya
Ileyibheli, i-Adhesive, iTape yokuCoca
Ifashoni kunye neMpahla
Isikhumba seLaser sokuLuka izihlangu
Ikhaphethi, Mat kunye nokusika iRug
Malunga neGolden Laser (i-PDF)
Kutheni iGolden Laser
Imodeli Hayi: I-CJGV-160130LD
Isambatho sokuLungiselela iLaser yeLaser yeZemidlalo
I-laser yombono ilungele ukusika ukuhonjiswa kwamalaphu edrafti yelaphu kuyo yonke imilo nobukhulu. Iikhamera ziskena amalaphu, zifumane kwaye zichonge i-contour eprintiweyo, okanye khetha amanqaku obhaliso ashicilelweyo kwaye usike uyilo olukhethiweyo ngesantya nangokuchanekileyo.
Imodeli Hayi: I-CJGV-190130LD
Umatshini wokusika we-Laser Wokuhambisa iifasilitha eziphrintiweyo
Ukusikwa kwe-laser ngokuchongwa kweVision kusebenza njengenkqubo efanelekileyo yokusika i-laser yokufakelwa kwamalaphu edayi. Iikhamera ziskena ilaphu ngexesha lokuhambisa, ukufumanisa into eprintiweyo okanye ukufunda amanqaku obhaliso…
Imodeli Hayi: QZDXBJGHY-160100LDII
Umatshini ozimeleyo oyi-Dual Head Vision Camera Laser Machine Machine
Inkqubo yokuzimela yeentloko ezimbini ezizimeleyo idityaniswa ngokugqibeleleyo nenkqubo yombono oqaqambileyo, kwaye iphinde yandiswe kwiimfuno zokuprinta imizobo.
Imodeli Hayi: I-MZDJG-160100LD
UkuBhaliswa kweKhamera yeGolide ye-GoldenCAM
Ukubhalwa ngokuchanekileyo kokumakishwa kwamanqaku okuma kunye nokuhlawulwa kwemveliso yobukrelekrele ngokuchanekileyo ngokusika i-laser yengubo yokuhanjiswa kwedyi, iilogo kunye namanani.
Imodeli Hayi: QZDMJG-160100LD
Isicoci se-Smart Ver laser kunye neKhamera ye-Contour Cut
Lo ngumatshini we-laser onamandla wokusika i-contour. Ngekhamera ye-HD enexhotywe, umatshini unokuthatha iifoto zepateni yedijithali eprintiweyo okanye emfakiweyo, aqaphele ukungqinelana kweepatheni aze anike imiyalelo yokusika entloko ye-laser.
Imodeli Hayi: CJGV-320400LD
Ifomathi ebanzi yeLaser umsiki weeFlegi ezinkulu, iiBhena, imiqondiso ethambileyo
Umsiki we-laser omkhulu wombono ulungiselelwe ngokukodwa ishishini lokushicilela ledijithali- ukuvelisa izakhono ezingenakuthelekiswa nanto zokugqibezela ubume obunemifanekiso obhalwe ngesandla okanye idayi-engaphantsi yemifanekiso yelaphu, izibhengezo kunye neempawu ezithambileyo.
Imodeli Hayi: JMCCJG / JYCCJG Uthotho
Isantya esiphakamileyo soMatshini weeMpahla eyolukiweyo iLaser Ukusika Umatshini
Olu luhlu lwe-CO2 yomatshini wokusika i-laser ye-flatbed yenzelwe ukuhanjiswa kweendwangu ezibanzi kunye nezixhobo ezithambileyo ngokuzenzekelayo kunye nokusikwa ngokuqhubekayo. Iqhutywa ngegiya kunye ne-rack nge-servo motor, i-laser cutter inikezela ngesantya esiphezulu sokusika kunye nokukhawulezisa.
Umatshini wokusika weLaser wokuCoca ilaphu, Izinto zokucoca ulwelo, Imithombo yeendaba yokuCoca
Iigiya zokuchaneka okuphezulu kunye ne-rack eqhutywa. Ukusika isantya ukuya kwi-1200mm / s. CO2 RF laser 150W ukuya ku-800W. Inkqubo yokuhambisa ngenqanawa. Ukuzondla okuzenzekelayo ngokulungiswa kwengxinano. Ifanelekile ukusika ilaphu lokucoca, imitya yokucoca, i-polyester, PP, fiberglass, PTFE kunye nelaphu elenziwa ngemizi-mveliso.
Umatshini wokusika i-Airbag yeLaser ene-Multi-layer Auto feeder
Izisombululo zeGoldenlaser ezinikezelwe ekusikeni i-airbag laser qinisekisa umgangatho, ukhuseleko kunye nokugcinwa, ukuphendula kwanda kunye nokuhluka kweebhegi zomoya ezifunwa yimigangatho emitsha yokhuseleko.
Imodeli Hayi: JMCCJG-160200LD
Umsiki weLaser weLaser kuMjikelo woKukhusela ukuShushusa woLusu
Umsiki weLaser ngokukodwa woboya obukhuselayo obengezelayo wokwenza isiciko esenziwe ngePET (polyester) imisonto ye-warp kunye nokucekisa imicu ye-polyolefin. Akukho kuncwina kwemiphetho yokusika ngenxa yokusika kwe-laser yanamhlanje.
Umatshini wokuSika i-Las Duct Sokuhambisa umatshini
Umdibaniso wefomathi enkulu X, Y axis laser ukusika (ukuncipha) kunye nesantya esiphezulu seGalvo laser perforating (imingxunya yokusika ye-laser). Yenzelwe ukusikwa kwe-duct yendwangu yokungenisa umoya (i-sock duct, sox duct, duct sox, duct sock, duct air nguo, air sock, air sox)
Imodeli Hayi: JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Imodeli Hayi: JMCZJ (3D) 160100LD
Umatshini we-CO2 Galvo Laser onesikhangeli sokuSika
Inkqubo ye-3D yeGalvo laser enamandla
Indawo enye yokuqhubekisa indawo 450 × 450mm
Iyakwazi ukupela ngaphandle komthungo ukuya kuthi ga kwi-1600mm
Qengqa ukuze ukwazi ukuqengqa
Imodeli Hayi: JMCZJJG (3D) 170200LD
I-Galvo kunye ne-Gantry Laser Engraving Machine yokusika umatshini, Isikhumba
Le nkqubo ye-laser idibanisa i-galvanometer kunye ne-XY gantry. IGalvo ibonelela ngesantya esiphezulu sokukrola, ukuqinisa, ukugquma kunye nokusika kwezixhobo ezinqabileyo. I-XY Gantry ivumela ukuhanjiswa kweprofayili enkulu kunye nesitokhwe esikhulu.
Imodeli Hayi: ZJJF (3D) -160LD
Ukuqengqeleka ekuqengqeleni ngomatshini wokungena kwiLaser yeLaser
Inkqubo ye-Galvo eshukumayo ye-3D, ukugqiba ukumakisha okuqhubekayo ukumakisha kwinqanaba elinye. Itekhnoloji ye-laser "kubhabho". Ifanelekile kwilaphu elikhulu lefomathi, ilaphu, isikhumba, i-denim, ikopa i-EVA.
Imodeli Hayi: I-ZDJMCZJJG-12060SG
I-SuperLAB | Umatshini we-XY Gantry kunye nomatshini we-Galvo laser onekhamera ye-CCD
I-SuperLAB, ukumakishwa kwe-laser okudityanisiweyo, ukufaka i-laser kunye nokusika i-laser, liziko lokwenza i-laser le-CO2 kwiziko elingelilo. Inemisebenzi yokujonga ukuma, umbono owodwa wokulungiswa kunye nokugxila kwe-auto…
Imodeli Hayi: ZJ (3D) -170200LD
IGalvo Laser Leather Engraving Machine yokuSika imveliso yeziXhobo
Isantya esiphezulu kunye nefomathi enkulu ye-laser yokufakra, ukugcwalisa kunye nokusika. Inkqubo yokuqhuba emibini kunye nesakhiwo searakhi. Inkqubo ye-galvanometer ekhethiweyo.
Imodeli Hayi: ZJ (3D) -9045TB
Isantya esiphezulu seGalvo Laser Engraving Machine yeZikhumba
I-CO2 RF i-laser yentsimbi engu-150W 300W 600W. Inkqubo yolawulo lwamandla e-galvanometer ye-3D. Ngokuzenzekelayo ukuya nasezantsi kwe-ax ax. Itheyibhile yokuzenzela i-zinc-iron alloy honeycomb ezenzekelayo.
Imodeli Hayi: MARS Series
I-MARS Series CO2 Ukusikwa kweLaser kunye nomatshini wokutsala
Uthotho lwe-MARS lubonisa inqanaba lethu lomatshini we-las2 ye-laser kwaye isetyenziswa ngabathengi ukusika kunye nokukrola iileyile, isikhumba, ukhuni, i-acrylics, iiplasitiki nokunye okuninzi.
Imodeli Hayi: MJG-160100LD / MJGHY-160100LD II
Intloko engatshatanga / Umatshini wokuSika iNtloko yeLaser ngeTekhanda leComfort
1600mmx1000mm (63 ″ x 39 ″) indawo yomsebenzi
Isingqengqelo somandlalo esihambelanayo nerrive feeder
Iintloko ezimbini ze-laser zivumela iinxalenye ezimbini ukuba zinqunywe ngaxeshanye
Imodeli Hayi: MJG-13090SG
Umatshini wokusika weLaser kunye neTafile yokuNyusa uMbane
1300mm x 900mm (51 "× 35") indawo yomsebenzi
Ukuphakanyiswa kwemoto ngohlobo lomsebenzi
I-CO2 yeglasi ye-laser ityhubhu 80 iiwatts ~ ezili-150
Itafile yeenyosi kunye neetafile zeesitayile
Imodeli Hayi: XBJGHY-160100LD II
Umatshini ozimeleyo oyi-Dess Head Leather Laser Machine for izicathulo
Iintloko ezimbini ze-laser ezisebenza ngokuzimeleyo omnye komnye zinokusika imizobo eyahlukeneyo ngaxeshanye. Iintlobo ezahlukeneyo zokwenza laser (ukusika i-laser, ukubhoboza, ukukrola, njalo njalo) kunokugqitywa ngexesha elinye.
Imodeli Hayi: I-ZDJG-3020LD
Umsiki weLaser ozenzekelayo kunye neKhamera yeCCD kunye neRoll feeder
Ukusebenza indawo 300mm x 200mm
Yontoni ukusika ilebhile ephothiweyo, iribhoni, yilena, Velcro ngaphandle koxwebhu ngaphakathi 200mm ububanzi
Imodeli Hayi: I-ZDJG-9050
I-CCD yekhamera yeLaser umsiki welebheli ephothiweyo, iiMatshisi ezimfakamfele
I-laser cutter enekhamera yeCCD ibekwe phezu kwentloko ye-laser. Yenzelwe ngokukodwa iilebheli ezilukiweyo, iipattery zokufeketha kunye nokusikwa kweebheji.
Imodeli Hayi: LC-350
Qengqeleka kwiRoll Label Die Cutting Machine
Ukusika i-laser engenasiphelo kunye nokuguqula isisombululo sokugqiba kwelebula. QR ikhowudi yokufunda ixhasa utshintsho oluzenzekelayo kubhabho. Isikhokelo sewebhu se-BST senza ukuba ukungathandeki kunye nokuphinda uhlehlise ngokuchanekileyo ngakumbi.
Imodeli Hayi: LC-230
Umatshini wokusika iileyibheli yeLaser Die
I-LC230 ngumatshini ogqityiweyo we-laser ogqibeleleyo womnatha wobubanzi obukhulu be-230mm. Olona khetho lufanelekileyo lokubaleka okufutshane zedijithali. Ukunikezela ngotshintsho lwe-zero ngokuhamba kwexesha kwaye akukho ndleko yokufa yeplate.
Imodeli Hayi: I-LC230
Umatshini wokusika i-Laser Die yomatshini wokubonakalisa / ifilimu
Izinto ezibonakalayo ze-laser die-cut-visual, zilungele ishishini leempahla ezibonakalayo eziphakamileyo. Inkqubo eyenzekelayo Ngokufanelekileyo ukusika kwe-laser
Umatshini oLungiselela isixhobo sokuLungisa iBhobho yeLander
Umatshini omkhulu wokusika umatshini wokusika i-laser ngokulayisha ngokuzenzekelayo kunye nokulayishwa. Ukusika macala onke, oxande, isikwere kunye nezinye iiprofayili zethumbu ukwanelisa uluhlu lweemfuno zokusika ityhubhu.
Imodeli Hayi: P2060 / P3080
Umatshini wokusika i-Tube Laser
Lo matshini wokusika ityhubhu ye-laser ye-automatic ene-automatic enezixhobo enomthwalo osisikhokelo kunye nendawo ebiyelweyo epheleleyo yokuvelisa iinxalenye ezikumgangatho ophezulu ngokobume obahlukeneyo.
Imodeli Hayi: GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T
Iphepha lesinyithi kunye noMatshini wokusika i-Tube Fibre Laser
Uyilo oluhlanganisiweyo lubonelela ngezinto ezimbini zokusika iphepha lesinyithi kunye neetyhubhu. Amandla e-Laser 1KW ~ 3KW, Indawo yokusika i-1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, Tube ubude 3m, 4m, 6m, Φ20-200mm
Imodeli Hayi: GF-1530JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT
Umnxeba oValiweyo oPheleleyo woPhahlekile kwiFilitha yeLaser kunye noMatshini wokuSika ooShicile weShiti
Umatshini osika phezulu we-fiber laser onomatshini ovaliweyo wokukhusela, itafile yokutshintshiselana kunye nesixhobo sokusika ityhubhu. Iipleyiti zensimbi kunye nemibhobho zinokusikwa kumatshini omnye.
Imodeli Hayi: I-P2080
Ingakumbi kwi-laser yokusika ityhubhu yomjikelo wesangqa, isikwere, uxande, unxantathu, i-oval, ityhubhu yesinqe kunye nenye ityhubhu emile kunye nombhobho. Ububanzi be-tube bangange-20-200mm, ubude buyi-8m.
Imodeli Hayi: GF-2560JH / GF-2580JH
I-6000W 8000W Umatshini wokusika i-Laser Machine
Amandla aphezulu kunye nefomathi enkulu yokusika i-laser ye-fiber. BECKHOFF CNC umlawuli. Indawo ye-2,5m × 6m, eyi-2m, eyi-2m, nge-8m Ubunzulu bokusika ubukhulu 30mm CS, 16mm SS
CO2 I-Laser Cutter
Umbono we-Laser Cutter
Umsiki we Flatbed Laser
Encinci ye-CO2 Laser Cutter
Isikhumba kunye nezihlangu
Iikhaphethi kunye neMats
Imiboniso kwiHlabathi liphela
I-Wuhan Golden Laser Co, Ltd.
Ipaki yeGolide yeLaser yeGolide, i-Tianxing Road, isitrato iHengdian, i-Chuanlong Avenue, iSithili saseHuangpi, iWuhan, iHubei, China
Ilungelo lokushicilela © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co, Ltd. Onke amalungelo agciniwe.